Khuburrada teknooloojiyadda ee carruutoodu ka mamnuuca shaashadaha | Saxil News Network
Khuburrada teknooloojiyadda ee carruutoodu ka mamnuuca shaashadaha
June 11, 2019 - Written by editor
Image captionCanug yar oo wax ka daawanaya teleefoon casri ah
Dadka ka shaqeeyo shirkadaha sameeya qalabka iyo adeegyada teknooloojiyadda ayaa inta badan carruurta uga digaa inay adeegsadaan teknooloojiyadda gaar ahaan teleefoonada iyo wixii lamid ah.
Pierre Laurent oo ah madaxa fullinta shirkad soo saarta teknooloojiyadda oo ku taalla San Francisco ayaa saddex carruur ah oo uu dhalay geeyay Iskuul gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Silicon Valley kaas oo carruurta ka hor istaago in waxa lagu baro ama ay adeegsadaan teknooloojiyadda ilaa inta ay ka qaangaarayaan.
Laurent ayaa BBC u sheegay in inta badan waaliddiita caruurtoodu wax ka dhigata Iskuulkan ay ka shaqeeyaan shirkado teknooloojiyadda qaabilsan.
Iskuulka ayaa waaliddiinta u sheegaa dhibaatooyinka ay teknooloojiyadda ku reebto carruurta wax barta.
“Uma baahna carruurta in shaashad ay wax ka bartaan balse waxaa loo baahan yahay in maskaxda carruurta tacliin lagu shubo” ayuu yiri Laurent.
Image caption‘Carruurta wax in la baraa xirfadaha noloshooda wax u tarayo balse laga ilaaliyo shaashadda’
Waxyaabaha is burinayo
Markii ugu horreysay ayay warbaahinta ku tilmaantay Iskuulka Silicon Valley inuu wado qorsheyaal isburinayo maadama carruurta wax ka barata waaliddiintooda ay ka howlgalaan shirkadaha ugu waaweyn dunida ee qalabka casriga soo saaro.
Iskuulkan ayaa u ololeeya halkudhiyada uu ugu magac daray ‘Waxbarasho wax ku ool ah oo ku aadan ‘koriinka maskaxda.
Gaaski ugu badnaa abid oo laga helay Deegaanka Soomaalida Itoobiya
Facebook oo dajisatay xogta macamiil ka badan 1.5 milyan
Manhajka uu Iskuulkan adeegsado ayaa diiradda saaraya xirfadaha ku saabsan, isku kalsoonaanta, aadaabta, firkir madaxbanaan, wadashaqeynta iyo curinta fikrado cusub.
“Maskaxda qofka banii’aadanka kuma kobacdo aqoon laga barto shaashad, waa in aad howl qabataa oo aad isku daydaa si aad wax u baratid” ayuu yiri Laurent.
Image captionWiil yar oo heysta qalabka ciyaaraha Online-ka
Dad badan ayaa rumeysan in teknooloojiyadda ay tahay nidaam laga maarmaan ah qarniga 21-aad oo loo adeegsan karo fasalada ardeyda isla markaasna horseedi karo in horumaro dhanka waxbarashada ah lagu tallaabsado.
Merve Lapus oo ah agaasimaha shirkad qoysaska talooyin ka siiso arrimaha teknoloojiyadda ayaa sheegay in aaladaha casriga uu carruurta ka caawinayo inay la jaanqaadaan dunida isla markaasna u sahli karo inay helaan fursado dhanka nolosha ah.
Waxaa uu sidoo kale qabaa in carruurta ay dhibaatooyin ay kala kulmaan teknooloojiyadda balse aanan la dhayalsan karin faa’idooyinka laga dhaxli karo.
Image captionCarruur faraxsan oo ku sugan Iskuulkooda
Ha’yadda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa dhawaan soo saartay talooyin ku aadan carruurta marka ay timaaddo daawashada shaashadda, waxay ha’yaddu soo jeedisay in carruurta aysan wakhti badan adeegsan shaashadda ama qalabyada kale ee lagu madadaaliyo ee leh shaashadda.
WHO waxay soo jeedisay in carruurta ay da’ddodu tahay 2 sanno jir aanan la daawadsiin telefishin ama shaashad, balse carruurta ay da’doodu ka sarrayso 2 jir ilaa 4 jir hal saac oo kaliya ah la daawadsiin karo telefishin maalintii.
Waayihii mid kamid ah culimada ugu caansan Soomaalida Kenya oo geeriyooday
Waxa Magalada Burco Lagu Qabtey Qalin jabinta Jaamacad Alpha
Maraykanka oo dalkiisa ka mamnuucaya TikTok iyo WeChat
fanaaniin iyo Jilaayaal caan ah oo shaaciyay inay joojinayaan isticmaalka Facebook
“ubadka waa in wax la baraa” adaa dhefsane mayirka degmada berbera abdishakuur maxamud xasan